मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति कांग्रेस प्रवक्ताको टिप्पणी- ‘फैसला’सम्मलाई दुई-चार दिनको घामछाया – News Dainik
News desk २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:४२ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् दुई-चार दिनको घाम छाया मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरेलगत्तै प्रवक्ता शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ती पद सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउन्जेलका लागि मात्रै भएको दाबी गरे । ‘पुनर्गठनमा टिप्पणी- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भाषामा कलेजोमा छ क्यान्सर, बूढी औंलामा सिवाजल गोली,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले लेखेका छन्, ‘समस्या प्रधानमन्त्रीमै छ, न मन्त्री फाल्नु समाधान हो न पाल्नु । ‘फैसला’सम्मलाई दुई-चार दिनको घाम छाया ।’
पुनर्गठनमा टिप्पणी @PM_Nepal कै भाषामा – कलेजोमा छ क्यान्सर बुढी औंलामा सिवाजल गोलि !
समस्या प्रधानमन्त्रीमै छ l न मन्त्री फाल्नु समाधान हो न पाल्नु l `फैसला´ सम्मलाई दुइ-चारदिनको घामछांया !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) June 4, 2021
अघिल्लॊ थपिने भन्दा निको हुने दोब्बर
पछिल्लॊ प्रधानमन्त्री एक्लैको जिम्मामा यी सात मन्त्रालय